Jecha hundaa qaree qabate ykn barruu haaraa barreessituf jijjiiramni filannooammeef fayyada.
Halluu filannoo barruu jijjiiruuf,barruu jijjiiruu barbaaddee filiti, sajoo Halluu Bocquu cuqaasi. Halluu adda addaa fayyadamuuf, xiyya sajoo Halluu Bocquutti aanee jiru cuqaasi, ittaansuudhaan halluu fayyadamuu barbaadde fili.
Barruu filuun sajoo Halluu Bocquu yoo cuqaafte,dibanni qaree ni mul'ata.Barruu halluu jijjiiruuf,barruu dibanni qareedanda'aa waliin fili.Halluu jecha baaqqee jijjiiruuf,jecha keessatti lama-cuqaasi.Halluu adda addaa fayyadamuu dhaaf,xiyya sajoo Halluu Bocquutti aanu cuqaasi.ittaansuudhan halluu fayyamuu barbaadde fili.
Jijjiirama dhuma gaabbuuf,mirga-cuqaa.
Haalata sarara irraaf fayyadamuu barbaadde filadhu. Jecha qofaaf sarara irraa fayyadamuuf, saanduqa Jechoota Dhuunfaafiladhu.
Halluu hulaa soraa sararootaa fili.
Jalmuruu barruu irraarfiitti yoo fayyadamte, jalmuriin sadarkaa irraarfiitti guddateera. Irraarfiin yoo barruu baramoo, waliin jecha keessatti qabatamee, jalmuriin hin guddatu.
Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:
Galteewwan qubguddeessa armaan gadli jireessa:
Dhangeessa Dhangii Burushiidibduudhaan Galagalchuu
Halluu Barruu Jijjiiruu
Title is: Galteewwan Bocaquu